Taratasy fiatoana amin'ny kolejy amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny College Term Paper tsara indrindra amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Taratasy fihenam-bidy amin'ny oniversite - ny zavatra tokony ho fantatrao
Iray amin'ireo ampahany manandanja indrindra amin'ny fanoratana taratasy momba ny oniversite ny fanaovana azy io mialoha. Midika izany fa atao amin'ny roa herinandro farafahakeliny alohan'ny fe-potoana voatondron'ny taratasy. Tsy mbola aloha loatra ny manafatra ny taratasinao (ary tokony tsy ho tara loatra izany) fa mbola tsy aloha loatra koa raha hividy azy.
Fa maninona no vidiana alohan'ny fotoana? Satria hamonjy anao ny fotoana hijerena azy io. Raha vao mividy azy ianao, dia vao manomboka miditra amin'ny nofon-taratasy. Ny fomba tsara indrindra hampiasana ny serivisy dia ny fandefasana azy mba hahafahanao mandoa izany alohan'ny fotoana. Tsy mila manao fangatahana fandoavam-bola marobe ianao raha tsy tianao. Amin'ny fampiasana ny carte de crédit dia afaka mandoa ianao aorian'ny fotoana iray raha tianao izany ary tsy maharitra roa tapa-bolana vao tonga eo aminao ny taratasinao.
Na izany aza, aza mividy ny carte de term-nao amin'ny carte de crédit aloha. Alohan'ny hividiananao azy dia mila mitady serivisy manolotra azy ianao. Misy serivisy maro isan-karazany any, fa mila misafidy izay manome ny karazam-baovao ianao. Misy serivisy sasantsasany izay mamela anao hividy azy io amin'izy ireo ihany. Mety handoa vola kely amin'ny serivisy izy ireo saingy matetika dia kely ary mendrika izany.
Raha mampiasa ny taratasy ianao noho ny antony manokana, dia tsy maninona na tsia mividy azy mialoha na tsia. Na izany aza, raha mividy azy mialoha ny fotoana ianao dia mila mitady fomba hafa hividianana ny taratasinao. Misy fomba vitsivitsy ahafahanao manao izany. Afaka mampiasa vola ianao na afaka mampiasa kaody vola. Manoro hevitra aho fa raha hividy an'ity taratasy ity amin'ny vola ianao dia mampiasa carte de crédit lehibe.
Inona no karazana serivisy ampiasanao tsy maninona fa karazana serivisy ampiasainareo no manao. Ny fomba malaza indrindra hividianana taratasy dia ny fampiasana serivisy handefasana azy ho anao. Amin'ity fomba ity dia tsy mila miahiahy momba ny fahazoana ilay taratasy aminao ianao. Raha manafatra azy amin'ny be dia be ianao dia handoa bebe kokoa saingy hanana fotoana fohy ianao.
Raha manafatra ny taratasim-piaranao eny amin'ny oniversite amin'ny serivisy ianao fa tsy mitady mividy azy amin'ny magazay, dia mila fantatrao ny haben'ny fehezan-teny. Ho mora aminao ny mametraka ny kaomandinao rehefa manana ny habeny marina ianao. Ho mora kokoa amin'ny serivisy koa ny manangona azy amin'ny fandefasana azy.
Ianao koa dia mila mieritreritra momba izay hampiasanao ilay taratasy. Betsaka ny karazan-taratasy azonao alahatra. Azonao atao ny manafatra taratasy miloko manokana ho an'ny tatitrao raha izany no ilainao. Azonao atao ny manafatra taratasim-barotra raha mila izany amin'ny tatitra momba ny orinasa ianao. Azonao atao koa ny manafatra taratasy famerenana amin'ny fikarohana asa. Betsaka ny zavatra isan-karazany azonao alahatra rehefa miresaka an'ity karazan-taratasy ity.
Tadidio fa ny haben'ny taratasy, ny loko ary izay hampiasanao azy dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny taratasy azonao. Raha mieritreritra ianao fa nahita ny taratasy tonga lafatra teny amin'ny oniversite dia te-hanafatra azy io haingana araka izay tratra. Ho afaka hahazo izany tsara ianao amin'ny fotoana voalohany ary hitazona ny naotinao.